Miyay Tahay Waxyaabaha Astaamaha Google? | Martech Zone
Sabtida, Juun 2, 2011 Khamiis, Juun 7, 2011 Douglas Karr
Maanta waxaan ka helay joornaal ka socda Google Analytics, daabacaadii koowaad ee mugga koowaad waxaa loo akhriyey sidan soo socota:
Bishan, waxaan ku bedeleynaa warbixinta caadiga ah "benchmarking" ee koontadaada Google Analytics xogta lagu wadaagay joornaalkan. Waxaan u adeegsaneynaa warsidahan tijaabo ahaan si aan ugu soo bandhigno macluumaad faa iido badan ama xiiso leh isticmaalayaasha Analytics. Xogta halkaan kujirta waxay ka timid dhamaan websaydhada iyagu doorta-in ay la wadaagaan xogta aan la aqoon ee Google Analytics. Kaliya kuwa maamulayaasha websaydhka ah ee karti u siiyay wadaagga macluumaadkaan qarsoodiga ah ayaa heli doona warsidahan "benchmarking".
Daabacaaddii ugu horreysay ayaa looga hadlay jaangooyooyinkii waddanku lahaa, oo ay ka mid ahaayeen Heerka Boogga:
Iyo Beddelka Himilada:
Waxaa jira khatar aad u weyn oo lagu jaangooyo waxqabadka boggaaga kuwan bartilmaameedyo. Xaqiiqdii, waxaan ku doodi karaa inay kuwani yihiin halbeegyo dhammaantood. Goob kasta way ka duwan tahay qaab dhismeedka iyo waxyaabaha ku jira. Burbur kasta oo ka yimaada ilaha taraafikada ayaa ka duwan… baaritaanka iyo gudbinta. Waqtiga xamuulka ee waddanku wuu ka duwan yahay… ilaa aad adeegsanayso adeeg si aad ugu kaydiso ilahaaga juqraafi ahaan. Su'aalahan xitaa kuma jiraan luqad…
Miyay calaamado u yihiin wadamada kaliya oo ay ku jiraan booqashooyinka iyo aragtiyada bogagga gudaha waddanka oo leh luuqad guud? Mise degelladan ayaa la tarjumay (oo qaadan kara waqti dheeri ah ama loo tarjumi karo si liidata waxay kordhineysaa buunshaha)? Goobuhu ma yihiin goobo ganacsi? Blogs? Baraha bulshada? Bogagga ma guurtada ah?
Dhibaato kale ayaa sidoo kale jirta. Qalabka sida Facebook Xayeysiiska Bulshada ayaa saameyn ku leh sicirka soo-kabashada si weyn maxaa yeelay Facebook waxay u weecisaa dadka isticmaala barta. Markuu booqdehu ku soo dego bartaada oo uu adeegsado qalabka wax lagu shubo ka hor intaanu ku dhaqaaqin waxqabad kale, way soo boodayaan. Halkan waxaa ku yaal tusaale mid ka mid ah macaamiishayda see waad arki kartaa halka ay ku rakibeen, ka jareen ka dibna ay ku rakibeen Xirfadaha Bulshada ee Facebook boggooda:
Talada aan siinayo macmiisha ayaa ah in si fudud loogu calaamadeeyo bartaada barta kale… cid kale ma lihid. Heerkaaga kabashada ma sii kordheysaa ama hoos u dhacaysaa? Ma martidaadu kor ama hoos ayey joogaan? Tirada aragtida bogga booqashadu miyay yihiin kor ama hoos? Sideed ugu badashay nashqadeyntaada ama waxa kujira inaad saameyn ku yeelatid khibrada martidaada? Waxaan ogsoonahay inay kordhayaan waqtiga booqdayaashu ku sii jeedaan goobta markaan fiirino fiidiyoow… macno samaynaysa, sax? Laakiin hadaanan usameynin fiidiyoow lamid ah usbuuc walba runti uma maleyn karno inaan qabaneyno shaqo liidata.
Laba tusaale oo ku saabsan balooggan:
Waxaan wax ka beddelnay naqshadeynta bartayada si aan ugu muujino qaybo ka mid ah boggeena guriga. Natiijo ahaan, heerka soo-kabashada ayaa hoos u dhacay tan iyo markii dadku ay gujiyeen boostada IYO bogagga booqashada ayaa si aad ah u kordhay. Haddii aan si fudud ku tuso xisaabta adigoon taas sharxin, waxay kaa tagaysaa inaad la yaabto. Ama haddii aad ku calaamadeysay bogagga kale, waxaa laga yaabaa inaan ka fiicnaanno ama ka sii darno natiijooyinkooda.
Waxaan bilownay warsideena. Waxaan ku soo kordhinaynay macaamiil joogto ah tan iyo markii aan ku darnay joornaalka booqdayaashanna way soo noqonayaan markay akhriyaan Natiijo ahaan, maalmaha warsidaha la keenayo, tiradayada bogga ayaa aad uga badan - celceliskeenna toddobaadlaha ahna wuu kordhay ku dhowaad 20%. Haddii aan iskaga dhigeyno bogag kale, ma leeyihiin warside? Ma daabacaan qaybo ka mid ah? Miyay isku ururinayaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin bulsho ahaan?
Si fudud loo dhigo, feker ahaanteyda, jaangooyooyinku ma bixinayaan xog macno leh oo aan ku hagaajinayo barta. Sidoo kale ma aanan awoodin inaan adeegsado jaangooyooyinka macaamiishayda. Halbeegga keliya ee muhiimka ah waa kuwa aan ugu duubno degelkeenna toddobaad kasta markay dhaafaan. Ilaa ay Google ku soo bandhigi karto qayb cad oo ka mid ah astaamahooda si ay si sax ah isu barbar dhigaan boggaga, macluumaadka waxba ma tarayaan. Ku bixinta macluumaadkan hogaamiyaasha ururka dhexdiisa runti waxyeello ayey u geysan kartaa… Waxaan jeclaan lahaa in Google ay si fudud uga tagto muuqaalka sheygan.
Tags: weligoodsicirka-ku-gaadhiga wareegaSlidercalaamadeynta bulshadaistiraatiijiyadda warbaahinta bulshadashaqsiyeynta webka